शनिबार, ७ असार
विदेशमा सार्वजनिक सवारी निःशुल्क हुँदैछ, नेपालमा कहिले हुने ६ असार २०७६
झरेको पातझैं जिन्दगी ! ७ असार २०७६
कांग्रेस प्रवक्ताको संगीत मोह : साहित्य रचनासँगै संगीतमा सक्रिय शर्माले मायाप्रेमसँगै राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीत रचेका छन् । उनले कर्णप्रिय संगीत पनि भरेका छन् । संगीत साधक शर्माद्वारा रचित गीतमा देशका चर्चित एवं लोकप्रिय गायकले स्वर भरेका छन् । . ७ असार २०७६
मन्त्रीका गाडी मोह : कुन मन्त्री कस्तो गाडी चढ्छन् ? ७ असार २०७६
अनवरत नाट्यकर्म : सडकदेखि सर्वनामसम्म ७ असार २०७६
आर्यघाटको अन्तरकथा : चिता नम्बर १० दाउराको वरिपरि फूलका माला सजाइएको छ । मानौं, सकेसम्म सुन्दर र नबिझाउने ओछ्यान बनाउने प्रयास हुँदै छ । जसका लागि बीचमा पराल राखिएको छ । परालसँगै डाल्डा घिउका प्याकेट फोरेर खन्याइन्छ । केही प्याकेट अगरबत्ती र बाटेका धूप छेवैमा छन् । . ७ असार २०७६
ज्यानमारा थालेसिमियाः अरूकै रगतको भरमा बाँच्छन् विरामी बच्चा जन्मेको केही महिनामै थालेसिमियाको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ । उमेरको अनुपातअनुसार बच्चाको तौल नबढ्ने, उचाइ नबढ्ने जस्ता विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । नेपालमा अझै पनि यो रोगको उपचार हुन सकेको छैन । . ७ असार २०७६
को हो रुपचन्द्र विष्टको हत्यारा ? ७ असार २०७६
प्रेम र सहर ! प्रेमका मामिलामा उदार बन्नु सहरको बाध्यता हो । त्यसैले काठमाडौं सहर धेरै बाध्यता, थोरै आवश्यकता र थोरै नियमित प्रक्रिया अनुरुप प्रेमका मामिलामा उदार छ । तर, प्रेमिल मन र हृदयका लागि काठमाडौं सहर उदार छैन । प्रेमी र प्रेमिकाका लागि । प्रेमिल जोडीका लागि सहर अझै संकुचित छ । साँघुरो छ । ७ असार २०७६
शिरीषको फूलकी सकमबरीले झस्काइरहन्छे पारिजातसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट त कहिल्यै भएन । तर, उपन्यास पढ्दै गर्दा लाग्छ, पारिजातसँगै छु । कतै पारिजातकै जीवन त पढिरहेको छैन ? अनि, सोच्छु, यो त फगत साहित्य हो । फेरि सोच्छु, साहित्य समाज हो, समाजको कल्पना हो, यथार्थको अंश मिसिएको ‘मिराज’ हो । अनि, म पारिजातले जस्तै कल्पना गर्न थाल्छु । ७ असार २०७६